मिर्गौला जोगाउन के गर्ने ? - खबरमञ्च खबरमञ्च
३० असार, खबरमञ्च, at 1:25 PM
By खबर मञ्च / July 15, 2019 / Comments Off on मिर्गौला जोगाउन के गर्ने ?
काठमाडौं । अहिले व्यस्त जीवनशैली र सही खानपान नहुनुको असर प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी रोग, मोटोपना र डायबिटिजका साथै मिर्गौलासम्बन्धी समस्या पनि तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । मिर्गौला स्वस्थ राख्न रेनल डाइट आवश्यक मानिन्छ ।
रेनल डाइट यस्तो खाना हो, जसमा सोडियम, फस्फोरस र प्रोटिनको मात्रा केही कम हुन्छ । यस डाइटले रगतमा विकार तत्वको मात्रा कम गर्छ, जसले मिर्गौलाको भार घटाउँछ, र मिर्गौला स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । खानामा यी तीन चिज कटौती गर्दा तपाईंको खाना रेनल डाइट बन्न सक्छ–
नुन : नुनमा प्रचुर मात्रामा सोडियम पाइन्छ । सोडियम शरीरका लागि आवश्यक तत्व हो, तर यसको बढी मात्रा मिर्गौलाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । प्रायः नेपालीको भान्सामा नुनको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी नै हुन्छ ।
त्यसैले, मिर्गौलाको सुरक्षाका लागि खानामा नुनको मात्रा घटाउनु आवश्यक छ । यसले मिर्गौलासम्बन्धी अधिकांश रोगको जोखिम घटाउँछ । स्वादका लागि नुनको सट्टा भिनेगार, कागती, टिमुरजस्ता विकल्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रोसेस्ड र जंक फुड : प्रशोधित र प्याकेटमा राखिएका खाद्यपदार्थ (प्रोसेस्ड र जंक फुड) मिर्गौलाका लागि हानिकारक हुन्छन् । यी खाद्यपदार्थको सेवन गर्न छोड्नु मिर्गौलासम्बन्धी स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण कदम हो ।
प्रचुर मात्रामा पोटासियम हुने खाद्यवस्तु : शरीरका लागि पोटासियम निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । तर, यसको मात्रा आवश्यकताभन्दा माथि हुनु भने राम्रो होइन । जब मिर्गौला सही ढंगले काम गर्दैन, रगतमा पोटासियमको मात्रा बढ्छ ।
यसबाट मुटुको धड्कनमा असर पर्छ, र हृदयघातको सम्भावना बढ्छ । त्यसैले, प्रचुर मात्रामा पोटासियम पाइने केरा, सुन्तला, जुनार, आलु, ब्रोकाउली, बन्दा, च्याउ, काजु, बदाम, सखरखण्ड, आँपजस्ता खाद्यवस्तु ज्यादा सेवन मिर्गौलाका लागि जोखिम बन्न सक्छ ।
Last Modified: July 15, 2019 @ 1:25 pm
“विदेशमा उपचार गर्न जाने कसैले पनि अब सरकारी कोषबाट पैसा पाउँदैनन्”
शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको शाखा जनकपुरधाममा
मेडिकल कलेजले भोलिसम्म रकम फिर्ता नगरे सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने